Dagaalkii Jannaale oo lagu Jabiyay Mooryaanta Goobaale iyo Qaar badan oo lagu ...g | Markacadey.com
Markacadey.com Somali News
Home / Wararka / Dagaalkii Jannaale oo lagu Jabiyay Mooryaanta Goobaale iyo Qaar badan oo lagu …	Dagaalkii Jannaale oo lagu Jabiyay Mooryaanta Goobaale iyo Qaar badan oo lagu …
Dagaalka ayaa Yimid kadib Markii Mooryaantii Shalay Qabsatay Degmada Wanlaweyn ay Maanta Weerar kusoo qaadeen degmada Jannaale ee gobalka Shabeelaha Hoose halkaasi oo muddo dagaal ay kula galeen Maamulka Degmada iyo Ciidamada deegaanka oo is garabsanaya.
Mooryaantan oo garab ka helaya Dowlada Xasan Culusoow ayaa Shalay kasoo baxay Magaalada Muqdisho , Waxey shalay dagaal ku qabsadeen degmada Wanlaweyn, Mooryaantaan oo wata in ka badan 45 Baabuurta Dagaalka ayaa usoo ruqaansaday dhanka degmada Janaale iyagoo soo maray Wado qardo jeex ah iyagoo ku dhici waayay in ay soo maraan wadada dheer ee isku Xirta Muqdisho iyo Kismaayo.
Inta aysan Soo gaarin Degmada Janaale ayaa waxey labo nin oo kasoo jeeda Beesha Hintire kusoo dileen degaanka Mareerey ee Duleedka Afgooye.
Dagaalka ayaa ku billoowday si kadis ah kadib markii Mooryaanta ay Ku qaldameen Barr Koontarool oo ay ku sugnaayeen Ciidamada Deegaanka iyo kuwa Maamulka degmada Jannaale, iyadoona muddo saacada ah halkaasi labada dhinac ay hubka culus isku adeegsanayeen.
Dagaalka ayaa waxa uu soconayay muddo, iyadoona la maqlayay dhawaqa madaafiicda culus oo ay is weydaar sanayeen ciidamada Deegaanka iyo Mooryaantii soo duushay, balse Saacado kadib ayaa waxaa halkaasi si qasab ah looga saaray Mooryaantii kasoo duushay gobolada Dhexe iyagoo halkaasi lagu gaarsiiyay Khasaaro Xoog leh .
Dhinaca kale Tiro lagu sheegay ilaa 40 Mooryaan ayaa waxey ku go’doomeen War ku taala duleedka degmada Jannaale halkaasi oo ay ku hareereysan yihiin Ciidamada deegaanka, Wararka qaar waxa ay sheegayaan in Mag